Page Maker သင်ခန်းစာ - MYSTERY ZILLION
Page Maker သင်ခန်းစာ
January 2010 edited January 2010 in DTP
snow,Page Maker နဲ.ပက်သက်ပြီး အကုန်သိချင်ပါတယ်။ သင်တန်းလဲ မတတ်ချင်ပါဘူး။ သိတဲသူများရှိရင် သင်ပေးနိူင်တဲ့သူများရှိရင် သင်ပေးကြပါနော်။ tutorial လေးတွေလဲထည့်ပေးပါနော်။ snow ဒီကနေဘဲသင်ယူချင်လို.ပါ။ သင်ပေးမယ့်သူများကို အတိုင်းထက်အလွန် ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။
PM ပဲ သုံးမှာလား InDesign ပြောင်းမသုံးသေးဘူးလား
InDesign အတွက် ရေးထားပေးတာ MZ ထဲမှာရှိတယ် ရှာဖတ်ကြည့်ပါ.
ဟုတ်တယ်. PM ဘဲသုံးမှာ။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ အလုပ်တွေက ကိိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်လို.မရဘူးလေ။သူတို.က PM မှ PM ဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ snow ကWord ကျွမ်းတာ ။ အဲဒါမရဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် PM သင်ခန်းစာလေးတွေ တင်ပေးကြပါနော်။ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။
ဒီစာအုပ်ကို ဒေါင်းပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်
PageMarker 7.0 အကြောင်းကို မြန်မာလို အခြေခံကစပြီး ရှင်းပြထားတာ
အစ်ကိုရေ အဲဒိစာအုပ်က ကကကွန်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်လားမသိဘူးခင်ဗျ ?
shop အတွက် catalog book လုပ်မလို့ ပါ ....help me... what need for me?